Nguwuphi umgaqo wokusebenza kwe-carbon adsorption
Amanzi acocekileyo asebenza kwifilter ye-carbon eyenziweyo kukusebenzisa umphezulu wayo oqinileyo, ukususwa kwe-adsorption yezinto eziphilayo okanye izinto eziyityhefu emanzini, ukuze amanzi ahlanjululwe. ...
Isihluzi sekhabhoni esenziwe ngokusekwe kumgangatho ophezulu weziqhamo zeqokobhe kunye namalahle asebenze njengekhabhoni, ekongezwa kukuncamathela kwenqanaba lokusebenzisa, kusetyenziswa itekhnoloji ephezulu, ngenkqubo ekhethekileyo, idibanisa ukufakelwa kunye nokuhluzwa, ukuthintela, ukukhathala, kungasusa ngokufanelekileyo ...
· Umzi mveliso wamayeza: zonke iintlobo zeyeza lokubulala iintsholongwane kunye nolunye ulwelo langaphambili lokucoca ulwelo. · Ishishini lokutya neziselo: ukuhluza iwayini, amanzi ezimbiwa kunye namanzi okusela. Umzi mveliso we-elektroniki: ukucoca amanzi kwangaphambili. Umzi mveliso weKhemikhali: ukuhluzwa kwezinyibilikisi ezahlukeneyo zezinto eziphilayo, iiasidi kunye ...
1. PP element umqhaphu lokucoca ulwelo linyibilike into opeyintiweyo yicwecwe ezinepolypropylene abahle yi esinyibilikayo eshushu ukunyibilika, nto leyo isetyenziselwa ukubamba amasuntswana enkulu ukungcola, ezifana eziqinileyo ezinqunyanyisiweyo kunye nentlenga emanzini. Umjikelo wokubuyisela ziinyanga ezi-3-6. 2. Ikhabhoni eyenziweyo ...
1. Icebo lokucoca ulwelo elisebenzayo lekhabhoni Icartridge yesihluzi esenziwe yasebenza ngamalahle esekwe kwikhabhoni kunye nakwikhokho yekhokhonathi eyenziwe yasebenza ngekhabhon enexabiso eliphezulu lokuthengisa njengesixhobo sokucoca ulwelo, kwaye sintered kwaye sicinezelwe ngesilinganisi sebakala lokutya. Ngaphakathi nangaphandle kwecandelo lekhabhoni ...
I-cartridge enkulu yokuhambisa amanzi, i-microporous folded membrane filter cartridge, i-cartridge yefriji yefowuni, i-cartridge yefriji yokuqhafaza, i-cartridge ye-carbon, i-cartridge ye-filter, njl njl. ) ...
Icebo lokucoca ulwelo emgceni, Isihluzi sePp Meltblown Cartridge, Kk Gac Cto Isihluzi seCartridge, Kk Isihluzi seCartridge, Iifilitha zamanzi zeNdlu iphela, iCartridge yokucoca amanzi,